ပျော်ရွှင်တဲ့RSရှိတဲ့စုံတွဲတွေအတွက် မကောင်းတဲ့သတင်းကတော့ သင်တို့စုံတွဲတွေက အခြားအတွဲတွေထက် ပိုပိုဝလာ ခြေများနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ပျော်စရာတစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက် သူတို့က ဝတာပိန်တာကို သိပ်စိတ်မဝင်စားကြလို့ပါပဲ။
လူသားတွေကအချစ်နဲ့မကင်းကြပါဘူး။ အချစ်နဲ့မတွေ့ခင်မှာ သူတို့ကိုသူတို့ ကျန်းမာအောင် လှအောင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ကြပေမယ့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ချစ်သူရသွားရင်ဖြစ်ဖြစ် ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ကြင်ဖက်တွေ့သွားခဲ့ရင်ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ကအရင်လိုမဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။
ပိုပြီးသက်တောင့်သက်သာနေလာကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပိုပိုပြီးစား ပိုပိုပြီး အိပ်လာကြတာမျိုးပေါ့။ ကျေနပ်စရာမကေ ာင်းတဲ့ဆက်ဆံရေး စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေက ပိုပိုပြီးပိန်လာကြတယ်လို့ လေ့လာမှုတွေကဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်အချစ်နဲ့ဝိတ်က ဆက်စပ်မှုရှိကြပါတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့RSပိုင်ထားတဲ့သူတွေ ဝဝ လှတာဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်။ စိတ်ချမ်းသာတာကိုး…ဒါပေမယ့်လည်း အချစ်က ဝ တာကိုလည်းပိန်စေနိုင်ပါတယ်နော်..ပိန်အောင်လုပ်မယ့်နည်းလေးတွေပြောပြမယ်.
သင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကျန်းမာရေးကိုဦးစားပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝိတ်တက်လာပြီဆိုစိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ်။ အလွန်အကျွဲတက်လာရင်တော့ နှလုံးသွေး ကြောဆိုင်ရာရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါနဲ့အဆစ်အမြစ် ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်..
#swolematesunday Justareminder that no matter what happened today tomorrow isanew day! You can handle whatever this week throws at you! @discoveringdanny ——————————————————————————– Who's fedup and ready forafall fightback? Theres less than3months left to finish this year fighting for your health! Why not bet on yourself with our tribe? Next dietbet starts 10/15! I joined my first dietbet in January 2016 when I started my journey & it helped me change my life! Time to change yours too & make those resolutions stick! Lose weight, share tips/recipes, giveaways including @fedupfam tees, @fitjoy, @doughbardoughnuts, an airfryer, & MORE! Plus get paid to get lean in 2018! Link in bio or dietbet.com/fatgirlfedup #weightloss #weightlossjourney #fedupfam #fit #fitfam #fitspo #motivation #sweat #fattofit #obesetobeast #zumba #dance #diet #dietbet #fatgirlfedupsdietbet #fitness #losingweight #fitnessmotivation #fedup #fitfam #lanebryant #plussize #looseskin #excessskin #effyourbeautystandards #extremeweightloss
A post shared by Lexi Reed (@fatgirlfedup) on Oct 14, 2018 at 7:30pm PDT
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စိန်ခေါ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ၊ ဝိတ်ကျဖို့အတွက် အတူကြိုးစားကြည့်ပါ။
ပိုမိုကျန်းမာစေတဲ့ ဝိတ်မတက်မယ့် အစားအစာတွေကို အတူချက်ပြုတ်စားသောက်ကြပါ။ နေ့တိုင်းပေါ့နော်။ ဝိတ်တက်ခြင်း ကျခြင်းက အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်တောင် သင့်ကိုချစ်ခင်တဲ့သူတွေအတွက် အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ရမယ်မလား? ဒါကြောင့် ကျန်းမာ၊ရေးနဲ့ညီတာတွေစားသောက်ကြပါ..ကဲ .ဒီလောက်ဆို အချစ်နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ချကြည့်လိုက်ဦး